October 21, 2020 – Xorriya Online
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo soo bandhigay khasaarahii ka dhashay weerarkii lagu qaaday 3 sano ka hor
Siyaasiga mucaaradka ah ee xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa soo bandhigey khasaarihii hantiyeed ee ka dhashay weerarkii lagu qaaday gurigiisa seddex sano ka hor, weerarkaas oo ay ku naf waayeen 6 nin oo ilaaladiisa ahaa. Sida lagu soo bandhigay Idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho waxaa weerarkaasi oo dhacay December 2017 ku baaba’day ama ku […]
Faahfaahinta dagaal caawa ka dhacay magaalada Cadaado
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal khasaare dhaliyay oo caawa ka dhacay afafka hore ee xaruntii hore ee madaxtooyada magaalada Cadaado. Iska hor imaad kooban ayaa dhexmaray sida wararku sheegayaan ciidanka Nabad Sugidda iyo Ciidan Maleeshiyo beeled ah oo hubeysan, kuwaasi oo weerar kusoo qaaday Ciidanka Nabad Sugidda Soomaaliya ee ku sugan Cadaado, waxaana […]
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo magacaabay taliye cusub
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa goordhow magacaabay taliyaha howlgelinta ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed. Wareegto kasoo baxday xafiiska Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa waxaa xilka Taliyaha Howlgelinta Ciidanka Daraawiishta Maamulka loogu magacaabay inuu noqdo Xasan Xared Cumar. Wareegtada ayaa waxaa lagu xusay in magacaabista Taliye Xasan Aadan ay ku timid, kadib […]
Daawo: Galmudug oo maanta soo bandhigtay nin fal kufsi ah geystay
Ciidanka booliska magaalada Cadaado ayaa gacanta ku dhigay nin la sheegay in uu kufsi ka gaystay Puntland, kaasi oo baxsad ahaan kusoo galay Galmudug. Booliska ayaa warbaahinta usoo bandhigay ninka la sheegay in fal kufsi ah ka gaystay degaanada maamul goboleedka Puntland, waxaana lagu soo bandhigay saldhigga booslika degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
DEG DEG: Dagaal Culus oo hadda ka socda degmada Cadaado
Wararka aan ka helayno Degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa ku warramaya in dagaal uu caawa ka dhacay degmadaasi, waxana kasoo baxaya warar kala duwan oo ku aaddan dagaalkaas. Wararku waxa ay sheegyaan in iska hor imaad kooban uu dhexmaray Ciidanka NISA iyo Ciidan maleeshiyo beeleed ah oo ku sugan degmada, kuwaas oo la sheegayo […]
Koofurta magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada 13-kursi oo ka harsanaa dhameystirka 27-ka xubnood ee golaha deegaanka magaaladaas oo muran ka taagnaa maalmihii lasoo dhaafay. Doorashadaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha Gudaha DG Galmudug Cabdi Waayeel, mas’uuliyiin katirsan maamulka gobolka Mudug & Magaalada Gaalkacyo, waxaana lagu hor doortay […]
Gacalisadii Jamal Khashoggi oo maxkamad la tiigsaneysa Dhaxal-sugaha Sacuudiga
Gabadhii uu doonaneyd weriyihii Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi ayaa dacwad ka gudbisay dhaxal-sugaha Sacuudiga, iyadoo ku eedeyneysa inuu isagu amray dilka. Hatice Cengiz iyo ururka u dooda xuquuqda bani`aadamka ee uu Khashoggi aasaasay kahor intuusan dhiman ayaa maxkamad la tiigsanaya Mohammed bin Salman iyo in ka badan 20 qof oo kale. Khashoggi waxaa […]
Jabuuti oo xirtay xudduudaheeda kaddib markii uu kusoo labo kacleeyay Coronavirus
Dowladda Jabuuti ayaa mar kale xirtay xudduudaheeda kaddib markii uu kusoo laba kacleeyey fayraska Karoona oo maalmihii la soo dhafay kiisas badan laga diiwaan geliyey dalkaasi. War kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Jabuuti ayaa lagu sheegay in xadduudaha dhanka dhulka la xirayo muddo 15 maalmood ah, si loo xakameeyo faafitaanka fayraska. Jabuuti waxay kamid ahayd dalalka […]
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay inuu aqbalay codsiyada ah in la sii daayo Bilaal Bulshaawi, oo caan ka ah barta Tiktok, kaas oo ku xiran magaalada Hargeysa. Qaar kamid ah dad kasoo qeyb galay munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa oo billad sharaf lagu guddoonsiinayay duuliye hore Axmed Maxamed Xasan (Axmed Dheere) […]
Dhawaan madaxda Soomaalida waxay ku heshiiyeen in marka kale dalka ay ka dhacdo doorasho dadban taasoo ka dhigan in ergooyiin la soo xulay ay dooran doonaan xildhibaannada barlamaanka. Halkii kursiba, musharrixiinta ku tartameysa waxaa u codeyn doona 101 qof, waxayna ka dhigan tahay in tirada guud ee codeynaysa ay gaareyso 27,775 Ergo. Doorashadii dhacday sannadkii […]